Manaja ny fiainanao manokana izahay
Politika momba ny tsiambaratelo ho an'ny balancer fampiroboroboana simika
Ao amin'ny Chemical Equation Balancer, azo alaina avy amin'ny chemicalequationbalance.com, iray amin'ireo laharam-pahamehantsika indrindra ny tsiambaratelon'ireo mpitsidika anay. Ity tahirin-kevitra momba ny tsiambaratelo ity dia mirakitra karazana fampahalalana izay angonina sy noraketin'ny Chemical Equation Balancer ary ny fomba fampiasantsika azy.
Raha manana fanontaniana fanampiny ianao na mitaky fampahalalana bebe kokoa momba ny politikantsika manokana dia aza misalasala mifandray aminay.
Chemical Equation Balancer dia manaraka ny fomba fanao mahazatra amin'ny fampiasana fisie log. Ireo rakitra ireo dia mandefa mpitsidika rehefa mitsidika tranonkala izy ireo. Ny orinasa fampiantranoana rehetra dia manao an'io ary ampahany amin'ny fanadihadian'ny serivisy fampiantranoana. Ny fampahalalana nangonina tamin'ny fisie log dia misy ny adiresy protokol internet (IP), ny karazana browser, ny Internet Service Provider (ISP), ny daty sy ny fotoana, ny pejy fanondroana / fivoahana, ary angamba ny isan'ireo tsindry. Ireo dia tsy mifandray amin'ny fampahalalana izay azo fantarina manokana. Ny tanjon'ny fampahalalana dia ny famakafakana ireo fironana, fitantanana ilay tranokala, fanarahana ny hetsiky ny mpampiasa ao amin'ny tranonkala, ary fanangonana fampahalalana momba ny demografika.
Google dia iray amin'ireo mpivarotra roambinifolo ao amin'ny tranokalanay. Mampiasa cookies, fantatra ihany koa amin'ny cookies DART, ny fanaovana doka amin'ny mpitsidika tranonkala mifototra amin'ny fitsidihan'izy ireo amin'ny www.website.com sy tranonkala hafa ao amin'ny aterineto. Na dia izany aza, ireo mpitsidika dia mety misafidy ny handà ny fampiasana cookies ho an'ny DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny adiresy an'ny adiresy Google sy ny votoatin-tranonkalan'ny Google ao amin'ny URL manaraka - https://policies.google.com/technologies/ads
Azonao atao ny mijery an'io lisitra io mba hahitanao ny Politika momba ny tsiambaratelo ho an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra ao amin'ny Chemical Equation Balancer. Ny politikantsika manokana dia noforonina tamin'ny alàlan'ny Free Generator Policy Policy ary ny Generator momba ny fiainana manokana amin'ny Internet.
Mariho fa ny Chemical Equation Balancer dia tsy mahazo miditra na mifehy ireo cookies ireo izay ampiasain'ny mpanao dokambarotra ankolafy fahatelo.
Tsy mihatra amin'ny mpanao dokambarotra na tranokala hafa ny politika momba ny tsiambaratelo ataon'ny Balancer momba ny fiainana manokana. Noho izany, manolo-kevitra anao izahay mba hijery ireo Politika momba ny tsiambaratelo avy amin'ireo mpizara doka fahatelo ireo raha mila fanazavana fanampiny. Mety tafiditra ao ny fomban'izy ireo sy ny torolàlana momba ny fomba hialana amin'ireo safidy sasany. Mety ho hitanao eto ny lisitr'ireo Politika momba ny tsiambaratelo sy ny rohiny eto: Rohy momba ny tsiambaratelo.
Azonao atao ny misafidy ny tsy hametaka ny cookies amin'ny alàlan'ny safidinao manokana. Raha te hahalala vaovao misimisy kokoa momba ny fitantanana cookie dia mety ho hita any amin'ireo tranokala misy ireo mpizara. Inona no atao mofo?
Fampahalalana ho an'ny ankizy
Ny ampahany iray amin'ny laharam-pahamehantsika dia ny fiarovana ny ankizy rehefa mampiasa Internet. Mamporisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina izahay mba hijery, handray anjara, ary / na hanara-maso sy hitantana ny asany an-tserasera.
Ny Balancer fampiroboroboana simika dia tsy manangona fampahalalana azo fantarina manokana avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 taona. Raha mieritreritra ianao fa ny zanakao dia nanome an'ity karazana fampahalalana ity amin'ny tranokalanay, dia manentana anao mafy izahay hifandray aminay avy hatrany ary hanao ny ezaka faran'izay tsara izahay esory avy hatrany ao amin'ny firaketana izany.
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mihatra amin'ny asantsika an-tserasera ihany ary manan-kery ho an'ireo mpitsidika ny tranokalanay momba ny vaovao nozarain'izy ireo sy / na nangoniny tao amin'ny Chemical Equation Balancer. Ity politika ity dia tsy azo ampiharina amin'ny fampahalalana voaangona ivelan'ny Internet na amin'ny alàlan'ny fantsona hafa ankoatr'ity tranonkala ity.
Amin'ny fampiasana ny vohikalanay, dia manaiky ny politikan'ny fiarovana ny tenanao ianao ary manaiky ny fepetra sy ny fepetra takiana aminy.